Romana amin'ny fifandraisana | Saripika sary maimaim-poana ho an'ny download
Romance amin'ny fifandraisana
Rehefa mandeha ny fotoana, dia afaka mihetsiketsika ny fitiavana
Samy mitady vady ny mpiara-miasa
Ny fihetsika kely sy ny fanomezana dia afaka manao zavatra betsaka
Afaka manangana indray ny fiarahamonina indray ve?
Miara-misakafo amin'ny mpifankatia
Aza avela hiverina indray ilay ramatoa
Indrindra raha rehefa maharitra taona maromaro ny fifandraisana dia mety mitranga izany indraindray fa mihena kely ny fiarahana amin'ny fiaraha-miasa. Ara-dalàna izany, saingy ny mpivady dia afaka manao zavatra momba izany, satria zava-dehibe ny mitazona ny fiarahamonina amin'ny fifandraisana. Mba hahombiazan'ity tetikasa ity dia zava-dehibe ny fiarahan'ny mpiara-miasa sy ny finiavana hitondrany ny romantika hiverina any an-tampony.
Hamelombelona ny fifankatiavana amin'ny fifandraisana
Raha ny marina, ny fifandraisana dia midika foana ny olona roa. Mazava ho azy, mazava ho azy, ny fanontaniana dia mitranga amin'ny hoe ahoana no ahafahan'ny rômanina ho tafiditra ao anatin'ny fiainana andavanandro. Misy fomba maro ahafahana miara-miaina ny fiainan'ny mpifankatia iray amin'ny fifandraisana iray.
Mpivady tanora manana sakafo amam-panahy
Matetika dia tsy ilaina ny mampiditra firaisana eo amin'ny fiaraha-miasa, satria na dia ny fihetsika kely aza dia manampy izany.
Ny tovovavy sasany dia tokony ho eo foana, satria ny mpivady dia afaka mandray soa avy amin'ny toetry ny fitiavana. Noho izany antony izany dia ilaina ny manamarina fa miverina amin'ny fifandraisana ny rômania ary mitondra ny mpiara-dia akaiky kokoa. Miara-misakafo miaraka amina sakafo iray na manome fanomezana kely ho an'ilay mpiara-miasa dia manampy hitazona ny fiainam-pitiavana.
Na ny asa fialam-boly iombonana dia afaka miantoka fa ny manodidina ny mpiara-miasa dia heverina ho tsara. Indraindray dia mety ho sarotra ny manao fihetsika amam-pihetseham-po mandritra ny fotoana maharitra, saingy ny ezaka dia matetika mendrika, satria ny fifandraisana feno ny fitiavana dia afaka manome fiainana sambatra ho an'ny mpiara-miasa. Fa nahoana no mihena ny rivotra iainana amin'ny toe-javatra sasany?
Raha tsy misy ny fanoherana mety hitranga, dia azo atao tsara ny manalavitra ny fihetseham-pon'ny mpifankatia amin'ny fifandraisana. Amin'ny fiandohan'ny ankamaroan'ny fifandraisana, ny fahalianana amin'ny mpiara-miasa dia tena lehibe, ary noho izany, ezaka maro no natao mba hanomezana fahafaham-po ny mpiara-miasa ary hampifaly azy.
Saingy amin'ny fotoana iray dia misy ny fifandraisana amin'ny fotoana izay manomboka ny fiainana andavanandro. Ny fitiavana ny namana indraindray dia raisina ho mendrika, ary ny ezaka izay efa nisy teboka manan-danja teo amin'ny fifandraisana tamin'ny farany dia lasa kely. Raha tsy misy ny fihetsika amam-pihetseham-po, dia ara-boajanahary ihany ny hoe miha-mitombo hatrany ny fiainana andavanandro ary miha-mitombo ny fifankatiavan'io fitiavana io.
Na dia eo aza ny fiaraha-miasa vaovao, dia mety hitranga izany fa mihena haingana ny fiarahamonina.
Mazava ho azy fa mitombina tsara ny fisorohana izany. Misy fomba maro hisorohana ny fifandraisana amin'ny fahantrana. Ny romantika dia tokony hijanona ho lohahevitra amin'izao fotoana izao amin'ny fifandraisana. Na izany aza, tsy ny iray amin'ireo mpiara-miasa ihany no afaka manome fomba amam-pihetseham-po. Ny tokony hatao kosa dia ny mahaliana ny mpiara-miasa tsirairay mba hikarakarana ny fitiavana.
Ny fitiavana amin'ny fiaraha-miasa dia tsy tonga amin'ny tenany. Samy mifandray amin'ny mpivady ireo mpifanolo-bodirindrina aminy mba hitazonana ny fihetseham-pon'ny mpifankatia. Rehefa miezaka ny hampifaly ny iray hafa ny roa tonta, dia mora kokoa ny mamorona fiainana andavanandro izay afaka manome fahafaham-po amin'ny fifandraisana.
Amin'ny alalan'ny fampiasana ireo mpiara-miasa ireo, dia azo atao ny miovaova be, fa ny olon-drehetra dia manana hevitra hafa momba ny fihetsiketsehana am-pitiavana. Samy mahatsapa zavatra hafa noho ny fitiavana ny olon-drehetra ary izany no mahatonga ny mpivady hieritreritra ny zavatra tiany indrindra. Ao anatin'ny fifandraisana iray izay efa nandeha nandritra ny fotoana fohy, dia nifankahalala tsara ny namana ary nahafantatra izay zavatra tiany.
Mora ny manomana zavatra manintona ilay mpiara-miasa ary mampitombo ny fahafaha-miditra amin'ny ezaka am-pitiavana. Raha samy miasa ho an'ny fifandraisana ny roa tonta ary manao izay rehetra azony atao mba hiarovana na hamelomana indray ilay tovovavy, dia mbola betsaka lavitra noho ny hoe iray monja no manatratra izany tanjona izany. Efa misy fihetsika kely manomboka eo amin'ny fihetsika kely.
Na dia ny fihetsika kely aza dia afaka maneho fihetseham-po manintona eo amin'ny fifandraisana. Ohatra, tsy mitaky ezaka be ny mividy fehezam-boninkazo aorian'ny asa ary entina any amin'ny mpiara-miasa aminy. Olona maro no faly rehefa mandray voninkazo ho fanomezana.
Ny fanomezana tsy ampoizina hafa dia afaka mampifaly ilay mpiara-miasa. Raha ny marina, ny fanomezam-pahasoavana amin'ny fifandraisana dia tsy vitaina amin'ny andro toy ny Krismasy, andron'ny mpifankatia na ny fitsingerenan'ny andro nahaterahana. Ny fanomezana iray izay tsy nampoizina, matetika dia manome fifaliana bebe kokoa, ho fanomezam-pahasoavana, izay antenaina ho mpiara-miasa amin'ny fialantsasatry ny daholobe dia eny ary mazava ho azy.
Noho izany fanomezam-pahasoavana toy izany dia mety hahafaly ilay namana. Tsy mampaninona na ho goavana na lafo ny misy ankehitriny. Mihevitra ny fihetsika izy, satria mampiseho mazava fa mbola misy fahatsapana mahery vaika ho an'ilay mpiara-miasa. Na izany aza, ny fanomezam-pahasoavana tsy nampoizin'ity karazana ity dia tsy tokony hatao isan'andro, raha tsy izany dia ho lasa resaka mazava izy ireo. Ireo fanomezana kely dia tokony hitazona ny maha-izy azy ireo mba hahafahany manohy mandray anjara amin'ny fihazonana ny fifankatiavana amin'ny fifandraisana.
Na teny amam-pihetseham-po, na filazana na famintinana amin'ny taratasy am-pitiavana aza, dia fomba tsara hanehoana ilay mpiara-miasa, izay tsapan'ny fihetseham-po. Ny fihetsika kely sy ny fanomezam-pahasoavana kely dia afaka manampy amin'ny fihazonana ny tovovavy hiaina na hamelona azy. Fa nahoana no zava-dehibe ny fiarahabana amin'ny fiaraha-miasa?
Tena ilaina ny fifankatiavana amin'ny fifandraisana
Amin'ny alalan'ny fihetsika amam-pihetseham-po na fihetsika amam-pihetseham-po dia mampiseho olona iray miahy ny namany. Matetika, adinon'ireo olona ny mankasitraka izay efa ananany. Tokony hifanerena foana ny fifandraisana tsara mba tsy ho very ny fitiavana ny fiarahamonina.
Ny fifandraisana am-pitiavana dia mety hanome fahafinaretana sy fiaraha-mikorana be dia be
Noho izany dia tsara raha samy miezaka ny hihazona ny fihetseham-po amam-panahy amin'ny fiaraha-miasa ny roa tonta. Tsy miharihary ny fifankatiavana. Anisan'izany ny fahaiza-mamorona sy ny fahaiza-manaony, satria ny fihetsika amam-pihetseham-po dia tokony ho variana ihany koa, mba hisakanana azy ireo tsy ho lasa monotona loatra. Raha toa ilay romantika, na dia eo aza ny ezaky ny mpiara-miasa, fa tsy afaka misaraka amin'ny fifandraisana iray, dia ilaina ny miantoka ny fiverenany.
Na dia miharatsy aza ny fihetseham-pon'ny mpifankatia amin'ny fiaraha-miasa, dia tsy midika izany fa nanjavona tanteraka sy mandrakizay izy. Fa kosa, misy ny fahafahana mahazo antoka fa ny fiarahamonina dia miverina amin'ny fifandraisana ary angamba na dia kely kokoa noho ny teo aloha aza.
Fotoana mahafinaritra ao an-trano
Amin'ny toe-javatra sasany, dia mety ho sarotra kokoa ny hamelona indray ny fiarahamonina, saingy amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra dia mendrika ny ezaka izany, satria ny fiaraha-miasa feno fitiavana dia zava-dehibe ho an'ny mpiara-miasa. Iza anefa no tena tia vehivavy? Vehivavy na lehilahy?
Moa ve vehivavy sy lehilahy mitovy firavoravoana?
Tsy azo atao mihitsy ny milaza hoe raha manambady kokoa ny vehivavy na ny lehilahy, satria ny olon-drehetra dia mahatakatra zavatra hafa amin'ny teny hoe "romance". Samy manana fihetseham-po amin'ny vehivavy ny vehivavy sy ny lehilahy. Ny fifandraisana dia afaka mahazo tombontsoa raha samy manolo-tena ny ankabeazan'ny mpiara-miombon'antoka amin'ny fiaraha-miombon'antoka ary mampiroborobo ny fifandraisana amam-pifaliana. Ka ny vehivavy sy ny lehilahy dia afaka mifankatia toy izany koa. Ahoana anefa no ahafahan'ny mpivady mandany takariva mahafinaritra ary aiza no mety?
Ny fiaraha-miasa iraisana, izay azo atao amam-pitiavana, dia fisakafoanana ao amin'ny trano fisakafoanana iray. Amin'ny fisakafoanana amin'ny trano fisakafoanana dia tsy voatery hanomana ny sakafony manokana ny mpivady, ary afaka mifantoka amin'ny fifampiresahana.
Ny fisakafoanana ao amin'ny trano fisakafoanana tsara dia heverina ho toy ny fialam-boly mahaliana ny fotoana fialan-tsasatry ny mpivady. Amin'ny takariva mahafinaritra, afaka manatona ny mpivady indray ny mpivady mba hanamafisana ny fihetseham-pon'izy ireo. Tsy ny fiaraha-misakafo ao amin'ny trano fisakafoanana ihany no afaka manatsara ny fifankatiavana. Ireo zava-mahadomelina koa dia tena mifanaraka amin'ny tanjona.
Inona no tokony hoeritreretin'ny olona amin'ny fanagadrana?
Mety ho hafa be ny zavatra tsy ampoizina. Azonao atao, ohatra, ny manamboatra takarivam-pifaliana iray ho anao ary avy eo mametraka azy io mba hahafahan'ilay mpivady hankafy izany fomba izany. Na dia hariva iray aza ao an-tranonao dia azo ampiasaina mba hamoronana fihetseham-po amam-panahy.
Tiavo ny tovovavy ao an-tranonao
Mozika kely, sofina mahazatra, filma mampihomehy ary filalaovana amam-bika. Na dia miaraka amin'ny fanampiana ireo zavatra madinika ireo aza, dia misy fotoana ahafahana mandany takarivam-pitiavana, izay azon'ny mpivady atao ny mankafy tanteraka. Tsy voatery handao ny tranonao ianao raha vantany vao vita ny fanomanana ny hariva.
Manandrama fotoana mahafinaritra miaraka amin'ny namanao
Ny takariva am-pandriana amin'ny sofa dia mety hahafinaritra tokoa. Mazava ho azy, misy fomba hafa afaka manampy amin'ny fifankatiavana amin'ny fiaraha-miasa. Ireo mpivady izay te-handany fotoana malalaka dia afaka manararaotra ny fahafahana ary mitady fialamboly iray, izay azon'ny mpivady atao miaraka.
Hiatrika ilay mpiara-miasa
Mazava ho azy, tsara ny miara-milalao romantsary amin'ny fiainana andavanandro ao anatin'ny fifandraisana. Ohatra, ny mpiara-miasa dia mety hifampizara amin'ny hafa mba hampisehoana fa liana amin'ny fialantsasatry ny namana izy ireo. Amin'ny fizarana tombontsoa, ​​ny mpivady dia afaka manararaotra ny fotoana malalaka miaraka aminy.
Ankoatra izany, azo atao ny mitady fialam-boly iraisana izay ahafahan'ireo mpiara-miombon'antoka ny fifaliany, satria, na izany aza, misy ihany koa ny fialam-boly izay heverina ho amam-pitiavana. Ohatra, ny mpivady dia afaka manao dihy sy manatsara ny fahaizany mandihy, avy eo am-pahombiazana ny fametrahana ny dihy vao navoaka tao amin'ny dihy dihy.
Ny fialam-boly ifampizarana dia afaka manampy amin'ny fampitomboana ny fifankatiavana amin'ny fifandraisana. Amin'izany fomba izany dia azo atao ihany koa ny mampiseho ilay mpiara-miasa fa misy fiahiana lehibe aminy. Raha vantany vao nahavita namerina ny fifankatiavana tao anatin'ny fifandraisana izy ireo, dia tokony hihevitra ireo mpiara-miasa fa tsy matory izy ireo.
Ny mpivady rehetra izay efa niaina ny fifankatiavana tamin'ny fifandraisana dia mahafantatra fa mety ho sarotra be ny fifankatiavana amin'ny fiaraha-miasa. Noho izany antony izany dia ilaina ny manamarina fa ny fihetseham-pon'ny mpifankatia dia tsy resin-tory indray. Ny romo-romana dia lafiny manan-danja amin'ny fifandraisana rehetra. Izany no mahatonga azy tsy tokony ho hita ao anatin'ny fiaraha-miasa.
Na dia ny fihetsika kely amam-pihetseham-po aza dia afaka mitondra anjara biriky amin'ny fifankatiavana amin'ny fifandraisana dia tsy atao tsirambina. Tsy ho sarotra ny milaza teny fiderana mahafinaritra na teny malefaka ary ny mpiara-miasa dia tsy maintsy hankasitraka izany. Fitsidihana toeram-pisakafoanana romantika na takariva mahafinaritra ao an-tokantrano dia fomba lehibe handaniana fotoana miaraka amin'ny namanao ary hanana fifanakalozan-dresaka, satria mazava fa resaka manjohy eo amin'ny fifandraisana iray no zava-dehibe. Efa azo atao izao ny miezaka tsy hanelingelina ny fifankatiavana amin'ny fiaraha-miasa.
Lisitry ny Filohan'ny Etazonia / Etazonia
Fehezam-boninkazo Brothers Grimm - The Puss in Boots